Kenya oo mar kale sheegtay in Diyaaradaha ka baxa Somalia lagu sii baari doono Garoonka Wajeer – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kenya oo mar kale sheegtay in Diyaaradaha ka baxa Somalia lagu sii baari doono Garoonka Wajeer
On Jan 22, 2017 Last updated Jan 22, 2017
Inkastoo uu qorshuhu ahaa bishii December 13-dii ee sannadkii hore inay Diyaaradaha ka ambabaxa Somalia si toos ah uga degaan Garoomadda Diyaaradaha Wilson iyo Jomo Kenyatta ee magaalladda Nairobi ayaa waxa muuqata inay Dowladda Kenya sii adkeysay Baaritaanadda lagu hayo Diyaaradaha ka ambabaxa Somalia.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Duullimaadka Diyaaradaha Rayidka ee Kenya, Gilbert Kibe ayaa sheegay in ay waajib tahay in Diyaaradaha ka ambabaxa Muqdisho ee ku sii jeeda Nairobi sababo dhinaca Ammaanka loogu sii baari doono Garoonka Wajeer oo 490-KM dhanka W/bari kaga toosan magaalladda Nairobi.
Isagoo la hadlayey Wargeyska Africa Review ee ka soo baxa magaalladda Nairobi, waxa uu tilmaamay inay Wajeer tahay Aag-dhuleedlagu baarayo Shaqaalaha iyo Rakaabka Diyaaradaha, lana sii wadi doono in lagu baaro Diyaaradaha ka yimaada Somalia.
Waxa uu intaasi ku daray inaysan jirin wax qorshe oo khasab oo lagu joojinayo Baaritaanadda dhinaca Ammaanka ee lagu sameeyo dhamaan Diyaaradaha ka yimaada Muqdisho, kuna sii jeeda Nairobi.
Hadalkaasi ayaa waxa uu meel ka dhac ku noqonaya Heshiiskii ay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta bishii September 13-dii ee sannadkii hore ku kala saxiixdeen magaalladda Muqdisho, kaasi oo ay isku af garteen in la qaado Xayiraaddii Qaadka laga keeno Kenya iyo inay Diyaaradaha si toos ah ugu kala gooshaan Muqdisho iyo Nairobi.
Inkastoo Dowladda Federalka dib u fasaxday Diyaaradihii Qaadka ka keeni jirey Kenya,waxaan dhinaca Kenya ka fulin in la joojiyo Diyaaradaha ka ambabaxa Somalia ee lagu baaro Garoonka Wajeer, iyadoo qorshuhu ahaa in Heshiiskaasi la dhaqan geliyo bishii December 13-dii ee sannadkii hore.
Safiirka Somalia u jooga Kenya, Jamaal Xasan waxa uu bishii hore sheegay inay Labada dowladood ku hershiiyeen in la fududeeyo dhinaca Duullimaadka, maadaama Garoomadda Muqdisho iyo Nairobi gacanta k uqaban karaa Ammaanka, lana baari karo qof kasta inta uusan raacin Diyaaradda.
Dhinaca kale, Duullimaadyadda Tooska ee Nairobi iyo Muqdisho waxay qaadan kartaa muddo hal saac iyo 27-daqiiqo, balse, marka ay sii maraan Wajeer, waxay ku qaadan kartaa ku-dhawaad 2-saac iyo bar.
Hawlgalka Baaritaanadda ee Garoonka Wajeer waxaa fuliya Ciiddanka Boliska iyo Ciiddanka Cirka Kenya, iyadoo isugu jirta baaritaanadda Iskaanka ee Shandadaha iyo Rakaabka iyo Nidaamka Socdaalka oo aad u dhibaato badan.
Shirakadaha Diyaaradaha ee Jubba Airways, African Express iyo Fly 540 ayaa waxay Duullimaadyo joogto ah maalin kasta isaga kala gooshaan Nairobi iyo qeybo ka mid ah Somalia iyo dalalka Gobalka.
Si kastaba ha ahaatee, Heshisikii Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda Heshiis Dhalanteed Siyaasadeed, isla markaana ay Rakaabka Soomaalida dhibaato weyn ku qabaan Safarka dheer ee ay Diyaaradaha ku sii maraan Garoonka Wajeer, ka hor intaan loo fasixin inay u sii gudbaan Nairobi.
30-dagaalyahan oo ka tirsanaa Kooxda Daacish oo lagu dilay Iraq.